တင်မိုး | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 2
ဆရာတင်မိုးနဲ့ မောင်စွမ်းရည်၊ ၂၀၀၆၊ မိုးမခစခန်းတနေရာ မောင်စွမ်းရည် ● ရေစကြို ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင် ကိုဘဂျမ်း (မိုးမခ) သြဂုတ် ၂၃၊ ၂၀၁၆ ကိုဘဂျမ်းဟာ လူပုံကအေးပေမယ့် ရင်တွင်းမအေးရှာပါ။ အထက်တန်းကျောင်းကိုဆက်တက်ချင်နေလိုက်ပုံက ထွန့်ထွန့်လူးလို့။ တနေ့တော့...
တင်မိုး – သာဓု သာဓု ဆရာကြီး
တင်မိုး – သာဓု သာဓု ဆရာကြီး (မိုးမခ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) သြဂုတ် ၁၊ ၂၀၁၆ ဘဘကြီး ဦးခင်မောင်လတ် (၁၉၁၅ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက် – ၁၉၉၆ သြဂုတ်လ ၁...
တင်မိုး – ဗိုလ်အောင်ကျော်သို့ (ကျောင်းသားများနေ့ အထိမ်းအမှတ် မှ)
တင်မိုး – ဗိုလ်အောင်ကျော်သို့ (ကျောင်းသားများနေ့ အထိမ်းအမှတ် မှ) (မိုးမခပြန်လည်ဆန်းသစ်) ဒီဇင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၅ မြင်းစီးပုလိပ် ဦးထိပ်ရိုက်ခွဲ၊ ပုံ၍လဲသည် သွေးရဲသံရဲ လူတယောက်။ လူသာလဲလည်း မစဲအသံ၊ မိုးမှာညံလျက် အောင်သံ…ကြွေးသံ…ဟစ်ကြွေးသံ။...
တင်မိုး – မြက်ရိုင်းညိုညို တက္ကသိုလ်
တင်မိုး – မြက်ရိုင်းညိုညို တက္ကသိုလ် (မိုးမခ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) ၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၀၁၅ ကံ့ကော်ပွင့်တွေ အစုလိုက် အပုံလိုက် ကြွေခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်မြေ အဓိပတိလမ်း မျက်ရည်စမ်းစမ်းနဲ့ လျှောက်မိတယ်။ ကျောင်းတံခါးတွေပိတ်...
တင်မိုး – ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေး လူကြီးမင်းများ
တင်မိုး – ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေး လူကြီးမင်းများ (ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၀၉ ၊ ၂၀၁၅ (၁) ဒီလူကြီးတွေ… ဒီလူကြီးတွေ…. သွားရေတွေ တများများ လူသားစား ကျားပါးစပ်နဲ့...
တင်မိုး – လူငယ့်ကြေးမုံ ၂
တင်မိုး – လူငယ့်ကြေးမုံ ၂ (ပြန်လည်ဆန်းသစ်) ဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၅) ဖြူစင်တဲ့ လူတွင်ကျယ်တွေကို “လူငယ်”လို့ သတ်မှတ်ရမယ်။ နိုင်ငံရဲ့ မိုးသောက်ကြယ်တွေပေါ့။ လူငယ်ဆိုတာ ငါစွဲ မကြီးရဘူး။...
တင်မိုး –တောင် ကု န်းထ က် က အ လံတော်
တင်မိုး –တောင် ကု န်းထ က် က အ လံတော် ဇန်န၀ါရီ ၁၅၊...
တင်မိုး – မြက်ရိုင်းထဲကကြေးရုပ်
မြက်ရိုင်းထဲကကြေးရုပ် တင်မိုး ဇူလိုင် ၁၈၊ ၂၀၁၁ (မိုးမခပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) မြက်ရိုင်းထဲတွင် ထိုင်ဆဲမလှုပ်၊ ဆန်းကြေးရုပ်။ သမိုင်းများစွာ ဖြတ်သန်းလာတော့ ငါသည်မြက်ရိုင်း နေရာတိုင်းကို သမိုင်းပြရုပ် ဆန်းကြေးရုပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မေ့ခဲ့ကြပြီ။ ဆန်း၏လမ်းစဉ်...
တင်မိုး – “အကျဉ်းထောင်က အလင်းရောင်”
“အကျဉ်းထောင်က အလင်းရောင်” တင်မိုး၊ မေ ၂၊ ၂၀၁၄ (ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) ထောင်စခန်းဆိုတာ အမှောင်လမ်းပါပဲ ဒါပေမဲ့ – အောင်ပန်းဆွတ်တဲ့ အာဇာနည်တို့ရဲ့ တာရှည် စံမြန်းရာ။ သစ္စာမဖောက် ဒူးမထောက် မကြောက်မရွံ့ သူတွေရဲ...
Tin Moe – ပျော်သင်္ကြန်
ပျော်သင်္ကြန် တင်မိုး၊ ဧပြီ ၁၃၊ ၂ဝဝ၇ (မိုးမခသင်္ကြန် ၂၀၀၇ မှ ပြန်လည်ဆန်းသစ်သည်) • New Year နှစ်သစ်မှာ ပိတောက်ပန်းတွေ ဝေလို့ပါ ဗုံသံသာသာ Drum တီး Dance...
★ သူ သာရှိ လျှ င် ★ Tin Moe
★ သူ သာရှိ လျှ င် ★ရေးသူ – တ င် မိုး☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆...
ကဗျာဆရာကြီး တင်မုိုး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၄ ဟေ့ ..ခေတ်သူခုိုး ဒမြဆုိုတဲ့ စစ်အစုိုးရ …. လက်နက်ချဟေ့ .. မင်းလက်နက်ချ။ တုို့မှာက ချစရာလက်နက်ဆုိုလုို့ အပ်တုိုတချာင်းမျှမရှိ နေသိလသိ...
အပျင်းထူတမ်း တင်မိုး (ကဗျာဆရာကြီး ဦးတင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း ၇ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ ပြန်လည်တင်ဆက်သည်) အဆင်းဖြူဖြူ နှင်းမြူတွေကြား ပြဒါးလင်းဂူ သွားပြီး အပျင်းထူထူနဲ့ ကစားချင်တယ်။ ဗိုက်ဆာမှ အမဲလိုက် သူရဲတသိုက်လို...
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း အကြောင်း မှတ်မိတာလေးတွေ တင်မိုး (ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၃ ဆရာကြီး သခင် ကိုယ်တော်မှိုင်းလို့ အသံကြားရတိုင်း ကြည်ညိုစိတ်၊ လေးစားစိတ်၊ ချစ်ခင်စိတ် ပေါ်လာသည်ချည်း။ ကွမ်းအစ်တစ်လုံး သျှောင်တစ်ထုံးနှင့် ရင်ဖုံးအင်္ကျီ...
လမင်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့ ဖန်မီးအိမ် ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ(တောင်စွန်း)၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၃ ပဉ္စရူပစာအုပ်တိုက်က “စာကိုစီလို့ လွမ်းတော်မူတယ်နှင့် ဆရာတင်မိုး (၆)နှစ်ပြည့် အမှတ်တရပွဲ ” ကို တော်ဝင်နှင်းဆီ ငြိမ်းချမ်းခန်းမမှာ ပြုလုပ်ပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာ...
ဆရာကြီးတင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း ၆ နှစ်ပြည့် စာအုပ် ရန်ကုန်မှာ ထွက်ပြီ
ဆရာကြီးတင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း ၆ နှစ်ပြည့် စာအုပ် ရန်ကုန်မှာ ထွက်ပြီ မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၃ လက်ခံရရှိတဲ့ ဖိတ်စာ၊ စီဒီနဲ့ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးအရ အဆိုပါစာအုပ် ကျန်ရစ်သူ သမီးမိသားစုများနဲ့ မိတ်ဆွေများကနေ...
ကဗျာဆရာကြီး ဦးတင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း ၆ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရစာအုပ် ထွက်မည်
ကဗျာဆရာကြီး ဦးတင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း ၆ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရစာအုပ် ထွက်မည် မိုးမခစာအုပ်စင်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ လာမယ့် ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ကဗျာဆရာကြီး ဦးတင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း ၆ နှစ်ပြည့်...
ဘ၀ထဲက ရတနာ၊ ရင်ထဲက ကဗျာ (၃၇) – treasure of my life, poems from my heart
တင်မိုး စက်တင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၂ “သံဃာတော်များကို သင်္ကန်းတွေဆွဲချွတ်၊ ထောင်ဝတ်ထောင်စားလဲပေးပြီး ထောင်ထဲဝင်လာကြတော့ အကျဉ်းသားများပင်လျှင် မျက်ရည်ကျကြရပါတော့တယ်။ ထောင်ထဲမှာ အရုဏ်ဆွမ်းမရှိ။ အုတ်၊ သမံတလင်းခုံမှာ သံဃာတော်များ ဖြစ်သလို သီတင်းသုံးရရှာတာ အလွန်ရင်နာဖွယ်ကောင်းပါတယ်”
ဘ၀ထဲက ရတနာ၊ ရင်ထဲက ကဗျာ (၃၆) – treasure of my life, poems from my heart
တင်မိုး ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၂ ၁။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကမ္ဘာကြီးက မီးလျှံထနေတယ်။ စီအန်အန်၊ ဘီဘီစီ စတဲ့ သတင်းဌာန တီဗွီတွေကို မကြည့်ချင် မြင်ပါလျက်သား မီးတောက်တွေတဖွားဖွား။ တိုင်းပြည်နယ်နိမိတ်လုကြ၊ ပြည်သူလူထုနဲ့ အာဏာရှင်တွေ...